Boky faharoan' ny Mpanjaka - Wikipedia
Boky faharoan' ny Mpanjaka
(tonga teto avy amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka)
Ny Boky faharoan'ny Mpanjaka na Mpanjaka faharoa dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly izay isan’ireo atao hoe boky fitantarana na ara-tantara. Ao amin’ny Tanakh izy dia isan’ireo bokin'ny mpaminany. Manohy ny tantaran’ny Fanjakan'i Joda sy ny an'i Isiraely izay niantomboka tao amin’ny Mpanjaka voalohany ity boky ity.
Io boky io dia mitantara ny nanjakan’ireo mpanjaka tsirairay hatramin’i Ahazia (na Okoziasa) ka hatramin’ny faharavan’ny Fanjakan’i Joda. Aseho tsirairay ny nitondran’ireo mpanjakan’i Isiraely sy ny an'i Joda izay voahelok’Andriamanitra noho ny tsy fanarahan’izy ireo ny didiny. Ny Fanjakan’i Isiraely dia rava voalohany ka ny Asiriana no nahavita izany, fa ny Fanjakan’i Joda kosa no rava farany tokony ho 130 taona taorian’izany tamin’ny fanafihan’ny Babiloniana.
Asehon’ny boky fa navela ho rava ny Fanjakan’i Israely sy ny Fanjakan’i Joda noho izy ireo nanjakan’ny tsy finoana an’Andriamanitra. Talohan’izany dia nandefa mpaminany Andriamanitra mba hananatra ny vahoaka sy ireo mpanjaka tsy hanompo andriamani-kafa fa hiverina amin’ny finoana marina, nefa tsy nisy vokany firy izany.
1 Ny anaran’ny boky sy ny fanoratana azy
1.1 Ny anaran’ny boky
2.1 Ny tantaran’ny mpaminany Elisa (1 – 13)
2.2 Ireo Fanjakana roa hatramin’ny nadravana an’i Samaria (14 – 17)
2.3 Ireo fotoana faramparany teo amin’y Fanjakan’i Joda (18 – 25)
3 Ireo olona resahina ao amin’ny boky
3.1 Ireo mpanjakan’i Joda
3.2 Ireo mpanjakan'i Israely
3.3 Ireo mpanjakan’ny firenena hafa
3.4 Ireo mpaminany
Ny anaran’ny boky sy ny fanoratana azyHanova
Ny anaran’ny bokyHanova
Ny Boky faharoan’ny Mpanjaka dia azo hafohezina amin’ny hoe Mpanjaka faharoa. Ao min’ny Baiboly hebreo (Tanakh) dia mitambatra ao amin’ny atao hoe Melakhim ("Mpanjaka") ny Mpanjaka voalohany sy ny Mpanjaka faharoa (Jereo: Bokin'ny Mpanjaka; hebreo: Sefer Melakhim).
Voatery nosarahana izy roa ireo mba tsy ho lava loatra ny horonana nanoratana azy tany aloha. Ao amin’ny Septanta na Septoaginta (Baiboly jiosy amin'ny dikan-teny grika) sy ny Volgata (Baiboly amin'ny dikan-teny latina) anefa dia atao hoe Bokin’ny Fanjakana (Libri Regnum) voalohany sy faharoa sy fahatelo ary fehefatra ireo boky efatra mifanarakaraka, dia ny Samoela voalohany, ny Samoela faharoa, ny Mpanjaka voalohany ary ny Mpanjaka faharoa.
Araka ny lovantsofina dia i Jeremia no nanoratra ny Boky faharoan'ny Mpanjaka, sahala amin’ny Boky voalohan'ny Mpanjaka. Fa ireo mpikaroka momba ny Baiboly dia milaza fa olona maro tamin’ny fotoana samihafa no nanoratra sy nanambatra ny lahatsoratra.
Azo zaraina roa na telo ny Boky faharoan'ny Mpanjaka :
Raha zaraina roa io boky io, ny fizaràna voalohany dia mahafaoka ny toko voalohany hatramin’ny faha-7 ary ny fizaràna faharoa ny toko faha-8 hatramin’ny farany (faha-25). Ny fizaràna voalohany dia fitantarana momba ny Fanjakana roa (i Israely sy i Jodà) hatramin’ny nandravàna an’i Samaria, renivohitr’i Israely ka nahalasa babo ny Israelita tany Asiria. Ny fizaràna faharoa indray dia mitantara ny fotoana nisian’ny Fanjakan’i Joda hatramin’ny faharavany taorian’ny naharavan’ny Fanjakan’i Isiraely.
Raha zaraina telo indray ny boky dia izao izany fizaràna izany: ny tantaran’ny mpaminany Elisa (1 – 13) sy ireo Fanjakana roa hatramin’ny nandaravana an’i Samaria (14 – 17) ary ireo fotoana faramparany teo amin’ny Fanjakan’i Joda (18 – 25).
Ny tantaran’ny mpaminany Elisa (1 – 13)Hanova
Namelona ny zanak'ilay vehivavy sonamita i Elisa - nataon'i Benjamin West - taona 1766.
Tohin’ny asan’i Elia sy fanamelohan’Andriamanitra an’i Ahazia (1.1 – 1.18)
Ny nampakarana an’i Elia any an-danitra sy ny fiantombohan’ny asan’i Elisa (2.1 – 2.24)
Ny adin’i Israely sy i Joda tamin’ny Moabita (3.1 – 3.27)
Ireo fahagagana nataon’i Elisa (4.1 – 6.7)
Ny ady tamin’ny Asiriana (6.8 – 8.29)
Ny tantaran’i Jeho (9.1 – 10.36)
Hatramin’ny nanjakan’i Atalia ka hatramin’ny nahafatesan’i Elisa (11.1 – 13.25)
Ireo Fanjakana roa hatramin’ny nadravana an’i Samaria (14 – 17)Hanova
I Amazia, mpanjakan’i Joda (14.1 – 14.21)
I Jeroboama II, mpanjakan’i Isiraely (14.22 – 14.29)
I Azaria, mpanjakan’i Joda (15.1 – 15.12)
I Samoma sy i Pekahia ary i Peka, mpanjakan’i Isiraely (15.13 – 15.31)
I Jotama sy i Ahaza, mpanjakan’i Joda (15.32 – 16.1.20)
I Hosea, mpanjaka farany tao Israely (17.1 – 17.6)
Natao sesitany ny Israelita ary nametrahana mpivahiny ny tao Samaria (17.7 – 17.40)
Ireo fotoana faramparany teo amin’y Fanjakan’i Joda (18 – 25)Hanova
I Hezekia (na Ezekiasa) sy ny mpaminany Isaia ary ny amin’i Asiria (18.1 – 20.30)
I Amona sy i Manase - mpanjaka tsy nivava (21.1 – 21.26)
I Josia (na Josiasa) sy ny fanavaozana ny finoana (22.1 – 23.30)
Ny naharavan’i Jerosalema (23.31 – 25.29)
Ireo olona resahina ao amin’ny bokyHanova
Ireo mpanjakan’i JodaHanova
Miisa 15 ireo mpanjaka nifandimby tao amin’ny Fanjakan’i Joda izay resahina ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka, dia i Jorama, i Ahazia, i Atalia, i Joasy, i Amazia, i Ozia, i Jotama, i Ahaza, i Hezekia, i Manase, i Josia, i Joahaza, i Joiakima, i Joakina ary i Zedekia.
Ireo mpanjakan'i IsraelyHanova
Miisa 11 ireo mpanjaka nifandimby tao amin’ny Fanjakan’i Isiraely izay resahina ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka, dia ireto avy izany : i Ahazia, i Jorama, i Jeho, i Joahaza, i Joasy, i Jeroboama II, i Zakaria, i Saloma, i Menahema, i Pekahia ary i Peka.
Ireo mpanjakan’ny firenena hafaHanova
Ireto avy ireo mpanjaka hafa voaresaka ao amin’ny Bokin’ny Mpanjaka faharoa: i Hazaela (mpanjakan’i Arama-Damaskosy), i Bena-Hadada III (zanak’i Hazaela), i Teglata-Falasara III (mpanjakan’i Asiria) , i Salmanatsara V (mpanjakan’i Asiria), i Senakeriba (mpanjakan’i Asiria), i Ratsona (mpanjakan’i Arama-Damaskosy) ary i Nebokadnetsara II (mpanjakan’i Babilona).
Ireto avy ireo mpaminany voalaza ao amin’ny boky : i Elia, i Elisa, i Holda, i Isaia ary i Amosa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Boky_faharoan%27_ny_Mpanjaka&oldid=1041702"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 17:46